I-China Liquid Oxygen kunye neNitrogen Production Plant / abavelisi be-Oxygen Generator kunye nabathengisi | OKANYE
Utywala Oxygen kunye neNitrogen Imveliso yeZityalo / i-Oxygen Oxygen Generator
Siyaziwa ngobuchule bethu obubalaseleyo bobunjineli ekuyileni izityalo zeoksijini ezingamanzi ezisekwe kwitekhnoloji ye-distillation ye-cryogenic. Ukuyila ngokuchanekileyo kwenza ukuba iinkqubo zethu zerhasi zithembeke kwaye zisebenze kakuhle zikhokelela kwiindleko zokusebenza eziphantsi. Eveliswa ngezinto ezikumgangatho ophezulu kunye namacandelo, izityalo zethu ezingamanzi ioksijini zihlala ixesha elide kakhulu zifuna ukugcinwa okuncinci. Ngokuthobela kwethu amanyathelo angqongqo olawulo lomgangatho, sinikwe izatifikethi ezaziwayo njenge-ISO 9001, ISO13485 kunye ne-CE.
Isiguquli somoya: Umoya ucinezelwe kuxinzelelo olusezantsi lwe-5-7 bar (0.5-0.7mpa). Yenziwa ngokusebenzisa ii-compressors zamva nje (Screw / Centrifugal Type).
Inkqubo yokupholisa kwangaphambili: Inqanaba lesibini lenkqubo libandakanya ukusetyenziswa kwesikhenkcisi ukupholisa kwangaphambili umoya osetyenzisiweyo kubushushu obujikeleze i-12 degrees C ngaphambi kokuba ungene kwisicoci.
Ukucocwa komoya ngesihlambululi: Umoya ungena kwisicoci, esenziwe ngamawele eeseyuli zeSkyve ezisebenza ngokwahlukileyo. Isefu yeMolekyuli yahlula i-carbon dioxide kunye nokufuma kwinkqubo yomoya ngaphambi kokuba umoya ufike kwiYunithi yokwahlula umoya.
Ukuphola komoya kwe-Cryogenic komoya nge-Expander: Umoya kufuneka upholile ukuya kumaqondo obushushu angaphantsi kweqondo lokunyibilika. Ifriji ye-cryogenic kunye nokupholisa kubonelelwa nge-turbo expander esebenza kakuhle, epholisa umoya kubushushu obungaphantsi kwe -165 ukuya kwi-170 degrees C.
Ukwahlulwa komoya oLwelo kwi-Oxygen kunye neNitrogen yiKholamu yokwaHlulwa komoya: Umoya ongena kwipleyiti yoxinzelelo oluphantsi yohlobo lokufudumeza ubushushu akukho kufuma, ioyile yasimahla kunye nekhabhoniyioksayidi. Ipholile ngaphakathi kobushushu obungaphantsi kwamaqondo obushushu angaphantsi kweqondo lobushushu ngenkqubo yolwandiso lomoya kwi-expander. Kulindelwe ukuba siphumeze umahluko okwi-delta esezantsi njenge-2 degrees Celsius kwisiphelo esishushu sabananisi. Umoya uyanyibilika xa ufikelela kwikholamu yokwahlula umoya kwaye wahlulwe waba yioksijini kunye nenitrojini yinkqubo yokulungiswa kwakhona.
Ioksijini engamanzi igcinwe kwiTanki yokuGcina uLwelo: Ioksijini engamanzi igcwaliswe kwitanki yokugcina ulwelo eqhagamshelwe kwisityibilikisi esenza inkqubo ezenzekelayo. Umbhobho wombhobho usetyenziselwa ukukhupha ioksijini engamanzi kwitanki.
Egqithileyo Uhlobo lwe-Cryogenic isikali esincinci sokwahlula umoya sityalo sejenreyitha yenitrojeni wenkunjini yeargon generator
Okulandelayo: Isityalo seNitrogen yeLiquid Isityalo seNitrogen seGesi, Isityalo seNitrogen esicocekileyo esinamatanki
Izixhobo zeOxygen zeLwelo